CS:GO မှာ Support ကစားသမားဆိုတာ ဘာလဲ? (By KaeKae) – Gaming Noodle
CS:GO မှာ Support ကစားသမားဆိုတာ ဘာလဲ?
By KaeKae (Zaw Yair Naung)
အခုလောလောဆယျ CS:GO လောကမှာအငွငျးပှားနတေဲ့ ကိစ်စတဈခုရှိပါတယျ။ အဲ့တာက တခွား MOBA ဂိမျးတှလေို Roles တှေ သတျသတျမှတျမှတျ ထားသငျ့ မထားသငျ့ဆိုတာပါပဲ။ တခြို့ကတော့ ဒါကို လကျမခံကွပါဘူး။ Player တိုငျးဟာစိတျကွိုကျ ပုံစံနဲ့ကစားခှငျ့ရှိပွီး ပှဲတဈပှဲကို အနိုငျရဖို့ဆိုတာ အသငျးသားတှကွေားက Chemistry နဲ့ Skills ‌အပျေါမှာပဲ မှီခိုတယျလို့ သတျမှတျထားကွပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့အနနေဲ့ ဆိုရငျတော့ ဒီကိစ်စမှာ Roles တှသော သတျသတျမှတျမှတျရှိမယျဆိုရငျ ဂိမျးက ပိုပွီး စနဈတကဖြွဈပွီးပှဲကိုခဉျြးကပျရတာ ပိုလှယျမယျလို့ ထငျပါတယျ။
လူတိုငျးဟာ Flashbang ပဈတတျပါတယျ။ဒါပမေယျ့ ပွိုငျပှဲမှာ Map ခုနှဈခုရှိတယျဆိုပါစို့။ကိုယျ့အသငျးက ဒီဟာထဲမှ ငါးခုမှာရှိတဲ့ Flashbangs, Smokes, Molotovs တှကေို အသငျးကို အကြိုးဖွဈအောငျ အသုံးပွုနိုငျဖို့က အခြိနျတျောတျောယူရမှာပါ။အဲ့တော့ player တိုငျးက Grenades တှပေဈဖို့ လကေ့ငျြ့ထားရမယျ…ဟုတျပွီ။ ဒါပမေယျ့ ဒီဟာကိုပဲ အသငျးမှာတဈယောကျယောကျက လုံးဝကြှမျးကြှမျးကငျြကငျြ လကေ့ငျြ့ထားမယျဆိုရငျရော ? map ရဲ့ဘယျ angle ကဖွဈဖွဈ flash ပွနိုငျရငျရော ?
Support တဈယောကျက ဘာတှလေုပျမလဲ ?
Support player တဈယောကျအနနေဲ့ဘာလုပျသငျ့လဲဆိုတာ အကွမျးဖငျြးပွောရရငျ Grenades အမြိုးအစားတှကေို အခြိနျယူလလေ့ာမယျ ဘယျအခြိနျ ဘယျလို ပဈမလဲဆိုတာကို အာရုံစိုကျသငျ့ပါတယျ။ In-Game Leader က ပွိုငျဘကျအသငျး ရဲ့ကစားပုံက အရမျးထူးဆနျးနပွေီ၊ ဥပမာ နရောတဈခုထဲကနေ သီးသနျ့ တိုကျနပွေီဆိုရငျ Support player အနနေဲ့ သီးသနျ့ Grenades တှနေဲ့ ဒီအခွအေနကေို ဘယျလိုပွောငျးနိုငျလဲဆိုတာ အဓိကကသြှားပါပွီ။
ဒီလိုဖွဈဖို့ဆိုတာကလညျး အသငျးသားတှကွေားက Communication ကအရမျးအရေးကွီးပါတယျ။ Support Player အတှကျက သူ့ Team mates တှကေပွောပွတဲ့ ပွိုငျဘကျရဲ့ Playing style ပျေါမူတညျပွီး ပွောငျးလဲ လှုပျရှား ရမှာပါ။ ကြှနျတေျာ့အမွငျအရဆိုရငျ Support Player တဈယောကျက တခွား player တှထေကျ Tactical ပိုငျးကို ပိုအာရုံစိုကျသငျ့ပါတယျ။
Support Player က Bomb ကို carry မယျဆိုရငျ အဓိကအားဖွငျ့ Bomb ထောငျမယျ ဒါမှမဟုတျ Bomb ကိုရှငျးလငျးမယျ့သူလညျးဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဘယျလိုကစားတာက အကောငျးဆုံးဖွဈမလဲဆိုတာကိုကတော့ ပှဲမြားမြားဆော့ပွီး အမြိုးမြိုးစမျးကွညျ့မှ သိနိုငျမှာပါ။ Support ရဲ့ကစားပုံကွောငျ့ ပုံမှနျဆိုရငျ Last Man အဖွဈကနျြခဲ့နိုငျပါတယျ။ အဲ့တော့ ဒီလိုအခြိနျမြိုးမှာ တဈဖကျက Player တှနေဲ့ ရငျဆိုငျတဲ့အခါ ဘယျလို အခွအေနမြေိုးမှာဖွဈပါစေ အနိုငျယူဖို့ကလညျးအရေးကွီးလာပွနျပါတယျ။ (1 on 1 ဒါမှမဟုတျ 1 on X,X=ကွိုကျတဲ့အရအေတှကျဖွဈနိုငျ)
ပှဲခြိနျပွငျပမှာဆိုရငျလညျး Support player က Leader နဲ့စကားပွောပွီး ဘယျလိုအခြိနျမှာ ဘာလုပျသငျ့တယျ ဘယျလို Grenades ကိုအဓိကထားလကေ့ငျြ့သငျ့တယျဆိုတာကို ဆှေးနှေးသငျ့ပါတယျ။ အကောငျးဆုံးကတော့ In-Game Leader က Support Role ကစားတာမြိုးပါ။ သူတို့က ဘယျအခြိနျမှာ ဘာကိုလုပျသငျ့သလဲ Grenades ကိုဘယျလို ပဈသငျ့သလဲဆိုတာ အသိဆုံးမို့လို့ပါပဲ။
Proတဈယောကျ Support ကစားပွတဲ့ ပှဲ !
Brazil CS:GO အသငျးတဈသငျးဖွဈတဲ့ Lumiosity က Virtus.Pro အသငျးနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ MLG Columbus မှာလကျစှမျးပွသှားတာပါ။ Lumiosity က လုံးဝ Comeback တှကေိုစနဈတကကြစားပွပွီး အဲ့ပှဲတငျမဟုတျပဲ Major ကိုပါအရယူသှားခဲ့တာပါ။ အဲ့ Major မှ Support Type ပုံစံမြိုးကစားပွသှားတာက Lincoln “Fnx” Lau ပါ။ Pure Support ဆိုပွီး သတျမှတျလို့မရပမေယျ့ Support တဈယောကျရဲ့ ကစားပုံကစားကှကျမြိုးကိုလှလှပပ ပွသှားပါတယျ။
စစခငျြးမှာ Fnx က Flashbang နဲ့ Playground ရဲ့ Park အပျေါနားလေးမှာနရောယူပါတယျ။ Gabriel “Fallen” Toledo က AWP နဲ့ခြောငျးဖို့ တာဝနျယူပါတယျ။ လှုပျရှားမှုကို သတိထားမိပွီဆိုတာနဲ့သူတို့ဘကျက Fnx က Flash ကိုစပဈပွီး Marcelo ‘coldzera’ David, FalleN နဲ့အတူ Fnx ကပါဝငျပဈမယျဆိုတဲ့ Plan ပါ။
ဒါပမေယျ့ဘယျသူမှ မ Push လာတဲ့အတှကျ Coldzera ကအရငျဆုံး Molotov တဈလုံးကို သဈပငျတှနေား အရငျစပဈလိုကျပါတယျ။ Fnx ရဲ့ Flash ကိုစောငျ့တယျ။ ပွီးတာနဲ့ Coldzera က အရငျဆုံးပွိုငျဘကျ Sniper ဆီက Bait Shot ကိုယူဖို့ခုနျထှကျပါတယျ။ အဲ့အခြိနျမှာပဲ FalleN က AWP နဲ့ Position Out နတေဲ့ ကောငျတှကေို ရှယျကြှေးပါတယျ။
နောကျတဈကှကျကတော့ fnx က restroom ထဲကို ခုနျပွီးဝငျပါတယျ။ CT ရှိနရေငျ Coldzera သတျဖို့ပါ။ ဒါပမေယျ့ရှိမနပေါဘူး။ A-Site ကို ခုနျရငျးခုနျရငျးနဲ့ပဲ ဘာတှရှေိနိုငျမလဲကို Fnx ကသှားကွညျ့ပါတယျ။ Sites နဲ့နီးလာပွီဆိုတာနဲ့ သူ Smoke တဈလုံးစပဈထညျ့လိုကျပါတယျ။ Sites နဲ့နီးလာတော့သူကံကောငျးပွီး Flashbang တဈခုထပျရလိုကျပါတယျ။ ပွီးတော့ Smoke တှမေပြောကျခငျမှာပဲ Molotov တဈလုံးပဈထညျ့ပွီးတော့ အသငျးအတှကျ ပဈကှငျးကောငျးကောငျးရအောငျဖနျတီးပေးပါတယျ။
coldzera လညျးထှကျလာပွီဆိုတာနဲ့ Fnx က အလငျြအမွနျ push ပွီး bomb ကို plant လုပျတယျ၊ ပွီးတော့ VP က ပျေါလာတဲ့ ကောငျတှကေို တဈကောငျပွီးတဈကောငျ နရောကောငျးကနေ အေးဆေး ထိုငျပဈ နတေော့တာပါပဲ။အပျေါက Fnx ကစားပုံကိုကွညျ့မယျဆိုရငျ Support player ဆိုတာ အသငျးနိုငျဖို့အတှကျ ဘယျလိုအခွအေနမှောဖွဈဖွဈ ပွောငျးလဲပွီး ဆော့နိုငျတယျဆိုတာကိုပါ သိရမှာပါ။
နောကျရကျတှမှောတော့ ဘယျလိုလူတှကေ Support ဆော့သငျ့သလဲဆိုတာရယျ ဘယျလို Train သငျ့သလဲဆိုတာရယျကို တငျပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ
KaeKae (Page-Kae2 CSGO) ဟာ ပွညျတှငျးနာမညျကြျော CSGO Pro တဈယောကျဖွဈပွီး မွနျမာပွညျ ထိပျတနျး CSGO အသငျးတှဖွေဈတဲ့ Alter-Howl, B-Beast နဲ့ Impunity Esports တို့မှာ ကစားဖူးတဲ့ အတှအေ့ကွုံမြား ရှိသူ တဈဦးပါ။ မွနျမာနိုငျငံ ကိုယျစားပွုပွီး World Electronic Sports Games (WESG) 2019 SEA Finals ကို မလေးရှားနိုငျငံမှာလညျး သှားရောကျယှဉျပွိုငျဖူးပါတယျ။
CS:GO မှာ Support ကစားသမားဆိုတာ ဘာလဲ?
အခုလောလောဆယ် CS:GO လောကမှာအငြင်းပွားနေတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲ့တာက တခြား MOBA ဂိမ်းတွေလို Roles တွေ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ထားသင့် မထားသင့်ဆိုတာပါပဲ။ တချို့ကတော့ ဒါကို လက်မခံကြပါဘူး။ Player တိုင်းဟာစိတ်ကြိုက် ပုံစံနဲ့ကစားခွင့်ရှိပြီး ပွဲတစ်ပွဲကို အနိုင်ရဖို့ဆိုတာ
အသင်းသားတွေကြားက Chemistry နဲ့ Skills ‌အပေါ်မှာပဲ မှီခိုတယ်လို့ သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဆိုရင်တော့ ဒီကိစ္စမှာ Roles တွေသာ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိမယ်ဆိုရင် ဂိမ်းက ပိုပြီး စနစ်တကျဖြစ်ပြီးပွဲကိုချဉ်းကပ်ရတာ ပိုလွယ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
လူတိုင်းဟာ Flashbang ပစ်တတ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ပြိုင်ပွဲမှာ Map ခုနှစ်ခုရှိတယ်ဆိုပါစို့။ကိုယ့်အသင်းက ဒီဟာထဲမှ ငါးခုမှာရှိတဲ့ Flashbangs, Smokes, Molotovs တွေကို အသင်းကို အကျိုးဖြစ်အောင် အသုံးပြုနိုင်ဖို့က အချိန်တော်တော်ယူရမှာပါ။အဲ့တော့ player တိုင်းက Grenades တွေပစ်ဖို့ လေ့ကျင့်ထားရမယ်…ဟုတ်ပြီ။ ဒါပေမယ့် ဒီဟာကိုပဲ အသင်းမှာတစ်ယောက်ယောက်က လုံးဝကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် လေ့ကျင့်ထားမယ်ဆိုရင်ရော ? map ရဲ့ဘယ် angle ကဖြစ်ဖြစ် flash ပြနိုင်ရင်ရော ?
Support တစ်ယောက်က ဘာတွေလုပ်မလဲ ?
Support player တစ်ယောက်အနေနဲ့ဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတာ အကြမ်းဖျင်းပြောရရင် Grenades အမျိုးအစားတွေကို အချိန်ယူလေ့လာမယ် ဘယ်အချိန် ဘယ်လို ပစ်မလဲဆိုတာကို အာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်။ In-Game Leader က ပြိုင်ဘက်အသင်း ရဲ့ကစားပုံက အရမ်းထူးဆန်းနေပြီ၊ ဥပမာ နေရာတစ်ခုထဲကနေ သီးသန့် တိုက်နေပြီဆိုရင် Support player အနေနဲ့ သီးသန့် Grenades တွေနဲ့ ဒီအခြေအနေကို ဘယ်လိုပြောင်းနိုင်လဲဆိုတာ အဓိကကျသွားပါပြီ။
ဒီလိုဖြစ်ဖို့ဆိုတာကလည်း အသင်းသားတွေကြားက Communication ကအရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ Support Player အတွက်က သူ့ Team mates တွေကပြောပြတဲ့ ပြိုင်ဘက်ရဲ့ Playing style ပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲ လှုပ်ရှား ရမှာပါ။ ကျွန်တော့်အမြင်အရဆိုရင် Support Player တစ်ယောက်က တခြား player တွေထက် Tactical ပိုင်းကို ပိုအာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်။
Support Player က Bomb ကို carry မယ်ဆိုရင် အဓိကအားဖြင့် Bomb ထောင်မယ် ဒါမှမဟုတ် Bomb ကိုရှင်းလင်းမယ့်သူလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုကစားတာက အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကတော့ ပွဲများများဆော့ပြီး အမျိုးမျိုးစမ်းကြည့်မှ သိနိုင်မှာပါ။ Support ရဲ့ကစားပုံကြောင့် ပုံမှန်ဆိုရင် Last Man အဖြစ်ကျန်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။ အဲ့တော့ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ တစ်ဖက်က Player တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်တဲ့အခါ ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးမှာဖြစ်ပါစေ အနိုင်ယူဖို့ကလည်းအရေးကြီးလာပြန်ပါတယ်။ (1 on 1 ဒါမှမဟုတ် 1 on X,X=ကြိုက်တဲ့အရေအတွက်ဖြစ်နိုင်)
ပွဲချိန်ပြင်ပမှာဆိုရင်လည်း Support player က Leader နဲ့စကားပြောပြီး ဘယ်လိုအချိန်မှာ ဘာလုပ်သင့်တယ် ဘယ်လို Grenades ကိုအဓိကထားလေ့ကျင့်သင့်တယ်ဆိုတာကို ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ In-Game Leader က Support Role ကစားတာမျိုးပါ။ သူတို့က ဘယ်အချိန်မှာ ဘာကိုလုပ်သင့်သလဲ Grenades ကိုဘယ်လို ပစ်သင့်သလဲဆိုတာ အသိဆုံးမို့လို့ပါပဲ။
Proတစ်ယောက် Support ကစားပြတဲ့ ပွဲ !
Brazil CS:GO အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ Lumiosity က Virtus.Pro အသင်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ MLG Columbus မှာလက်စွမ်းပြသွားတာပါ။ Lumiosity က လုံးဝ Comeback တွေကိုစနစ်တကျကစားပြပြီး အဲ့ပွဲတင်မဟုတ်ပဲ Major ကိုပါအရယူသွားခဲ့တာပါ။ အဲ့ Major မှ Support Type ပုံစံမျိုးကစားပြသွားတာက Lincoln “Fnx” Lau ပါ။ Pure Support ဆိုပြီး သတ်မှတ်လို့မရပေမယ့် Support တစ်ယောက်ရဲ့ ကစားပုံကစားကွက်မျိုးကိုလှလှပပ ပြသွားပါတယ်။
စစချင်းမှာ Fnx က Flashbang နဲ့ Playground ရဲ့ Park အပေါ်နားလေးမှာနေရာယူပါတယ်။ Gabriel “Fallen” Toledo က AWP နဲ့ချောင်းဖို့ တာဝန်ယူပါတယ်။ လှုပ်ရှားမှုကို သတိထားမိပြီဆိုတာနဲ့သူတို့ဘက်က Fnx က Flash ကိုစပစ်ပြီး Marcelo ‘coldzera’ David, FalleN နဲ့အတူ Fnx ကပါဝင်ပစ်မယ်ဆိုတဲ့ Plan ပါ။
ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမှ မ Push လာတဲ့အတွက် Coldzera ကအရင်ဆုံး Molotov တစ်လုံးကို သစ်ပင်တွေနား အရင်စပစ်လိုက်ပါတယ်။ Fnx ရဲ့ Flash ကိုစောင့်တယ်။ ပြီးတာနဲ့ Coldzera က အရင်ဆုံးပြိုင်ဘက် Sniper ဆီက Bait Shot ကိုယူဖို့ခုန်ထွက်ပါတယ်။ အဲ့အချိန်မှာပဲ FalleN က AWP နဲ့ Position Out နေတဲ့ ကောင်တွေကို ရှယ်ကျွေးပါတယ်။
နောက်တစ်ကွက်ကတော့ fnx က restroom ထဲကို ခုန်ပြီးဝင်ပါတယ်။ CT ရှိနေရင် Coldzera သတ်ဖို့ပါ။ ဒါပေမယ့်ရှိမနေပါဘူး။ A-Site ကို ခုန်ရင်းခုန်ရင်းနဲ့ပဲ ဘာတွေရှိနိုင်မလဲကို Fnx ကသွားကြည့်ပါတယ်။ Sites နဲ့နီးလာပြီဆိုတာနဲ့ သူ Smoke တစ်လုံးစပစ်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ Sites နဲ့နီးလာတော့သူကံကောင်းပြီး Flashbang တစ်ခုထပ်ရလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Smoke တွေမပျောက်ခင်မှာပဲ Molotov တစ်လုံးပစ်ထည့်ပြီးတော့ အသင်းအတွက် ပစ်ကွင်းကောင်းကောင်းရအောင်ဖန်တီးပေးပါတယ်။
coldzera လည်းထွက်လာပြီဆိုတာနဲ့ Fnx က အလျင်အမြန် push ပြီး bomb ကို plant လုပ်တယ်၊ ပြီးတော့ VP က ပေါ်လာတဲ့ ကောင်တွေကို တစ်ကောင်ပြီးတစ်ကောင် နေရာကောင်းကနေ အေးဆေး ထိုင်ပစ် နေတော့တာပါပဲ။အပေါ်က Fnx ကစားပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် Support player ဆိုတာ အသင်းနိုင်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုအခြေအနေမှာဖြစ်ဖြစ် ပြောင်းလဲပြီး ဆော့နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပါ သိရမှာပါ။
နောက်ရက်တွေမှာတော့ ဘယ်လိုလူတွေက Support ဆော့သင့်သလဲဆိုတာရယ် ဘယ်လို Train သင့်သလဲဆိုတာရယ်ကို တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
KaeKae (Page-Kae2 CSGO) ဟာ ပြည်တွင်းနာမည်ကျော် CSGO Pro တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည် ထိပ်တန်း CSGO အသင်းတွေဖြစ်တဲ့ Alter-Howl, B-Beast နဲ့ Impunity Esports တို့မှာ ကစားဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံများ ရှိသူ တစ်ဦးပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြုပြီး World Electronic Sports Games (WESG) 2019 SEA Finals ကို မလေးရှားနိုင်ငံမှာလည်း သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖူးပါတယ်။